Misy tranonkala SEO tranonkala afaka manampy ahy amin'ny backlinks ve?
Eto ambany eto dia hilaza aminao ny fomba hisafidianana tranokala SEO amin'ny aterineto aho mba hisorohana ny mety hitranga mety hitranga. Ny tiako hambara eto dia ny olana mahazatra indrindra amin'ny fanitsakitsahana ny toro-làlan'ny Google, izay mety miteraka sazy an-dalam-pivoarana na famaranana ny fanondroana ny fahefana feno. Ny zavatra dia ny fandinihan'ny milina fikarohana mba hamantarana ny fandikan-dalàna, ny fanodikodinana, na ny volavolan-dalàna momba ny tranonkala ambony amin'ny SERPs. Anisan'ireo fahita matetika indrindra, ny tsy fahampian'ny votoaty tsara, ary koa ny famerenana mivantana tsy ara-drariny. Izany no mahatonga ity hevitra ity ho hevi-dehiben'izy ireo mba hanohizan'ny maso ny dingan'ny fananganana rohin'ny organika ho an'ny tranonkala rehetra - web. Raha manao izany ianao dia mila mifidy ny tranonkala SEO amin'ny Internet. Ary maro ireo fitaovana toy izany azo aleha amin'ny fidirana mivantana. Noho izany, ahoana no fomba ahafahana manao safidy tsara?
Andeha aloha hojerentsika ny zavatra tokony hoeritreretinao voalohany sy ambony. Manoro hevitra aho raha manana fanamarinana indroa mifandraika amin'ireto manaraka ireto:
Ny tantaran'ny rohy momba ny fanoratana anao ao anatin'ny telo volana farafahakeliny
Fandalinana lalina ny rohy fanoratana anao
fanamarinana manokana momba ny karazan-rohy rehetra anananao
Noho izany, mba hisorohana ny sazy Google ho an'ny fiverimberenana tsy miangatra dia manoro hevitra aho ny handinika ny tranonkala SEO mpitsikilo an-tserasera ny fitaovana ampiasaina ampiasana fitaovana ampiasaina manaraka: Serpstat, Ahrefs, Majestic, na Semalt Analyzer. Raha ny amiko, dia manoro hevitra ny manara-maso ny rakitra momba ny sehatr'asa ianao isan-kerinandro, na farafaharatsiny indray mandeha isaky ny roa herinandro. Ny fampiasana tranonkala SEO rehetra amin'ny Internet izay notononiko talohan'izay dia afaka manampy anao handamina ilay dingana amin'ny fomba mahaleotena, efa saika feno.
Mba hahamora ny fanaraha-maso ny rindran-damina na dia mora sy mora kokoa aza, andao hijery karazana fifandraisana mahazatra ny famerenana ny Backlink Analysis avy amin'i Serpstat ho ohatra tsara indrindra. Ho fanatanterahana ny fanombanana fanadihadiana fototra, mila mitsidika ny tranonkala ofisialin'ny mpamatsy aterineto isika. Raha vao miditra ny anaran-tsaintsika izay mila manamarina, dia homena tatitra momba ny fehintsoratra momba ny fohy. Raha mijery ity tatitra fanadihadiana mahazatra ity isika, dia naka ohatra ho antsika: 1)
Ny tantara vao haingana, mandrakitra ny fanavaozana sy ny fanovana, izay
Ny lisitry ny rohy azo antoka azo avy amin'ny faritra misy ny fahefana matanjaka indrindra. edu or. gov, fantatry ny Google amin'ny tenany manokana, ary koa ny sisa amin'ireo mpitady fikarohana, toa an'i Bing sy Yahoo
Lisitry ny fitandremana voatahiry izay vao noforonina vao haingana sy vao haingana, ho an'ny fisainanao bebe kokoa sy
Ny fandaharam-potoana momba ny fifamoivoizana momba ny sehatra mifandraika amin'ny vanim-potoana vao haingana hatramin'ny telo volana
Lisitry ny vatan'ny vatofantsika, sy ny isa misy azy
Ny fanombanana ny valin'ny tranonkalanao momba ny famerenana mivantana, izay novinavinan'i Serpstat ho fampiharana ny fitokisana.
Izany fomba izany dia azontsika antenaina ny fanadihadiana lalindalina kokoa momba ny famerenana amin'ny tranonkala serasera SEO amin'ny aterineto mba tsy haharitra 10-15 minitra mahery. Araka ny efa voalazako, dia ianao ihany no misafidy ny fomba fijerin'ny fikarohana momba ny backlink amin'ny iray amin'ireo fitaovana efatra voalaza etsy am-piandohana. Ho ahy, nahita ny tranonkalako amin'ny tranonkalako farany aho amin'ny fampiasana ny fitaovan'i Serpsat. Ary azonao atao koa ny miezaka mampiasa ny Semalt Analyzer, satria na dia lalindalina kokoa aza ny miditra ao amin'ny fampisehoana andavanandro ny tranonkalanao.